ကင်ဆာရောဂါပျောက်ကင်းသွားလို့ ၄ နှစ်သမီးလေးရဲ့မျက်နှာမှာ အပြုံးပန်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီ - YOYARLAY Digital Media and News
အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေက ကင်ဆာရောဂါကို အများဆုံးခံစားကြရတယ်လို့ ပြောရမလို့တောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတဲ့သူတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ၊ ကလေးတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရောဂါကို ခံစားနေကြရတာ အလွန်သနားဖို့ကောင်းလှပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါကို ပျောက်ကင်းတဲ့သူရှိပေမယ့် အတော်လေးရှားပါတယ်။ အခုလည်း အသက် (၄) နှစ်အရွယ် လူလာ ဘတ်သ် ဘော်ဒန် (Lula Beth Bowden) ဆိုတဲ့ ကလေးမလေးဟာ ကင်ဆာရောဂါကို တွန်းလှန်တိုက်ဖျက်နိုင်သွားခဲ့ပါပြီ။ လူလာဟာ ကင်ဆာရောဂါ အဆင့် ၂ ကို တွန်းလှန်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ ရိုးရှင်းပြီး အားပြင်းတဲ့စကားလုံး (၆) လုံးနဲ့ ဂုဏ်ယူစွာ ပြသခဲ့ပါတယ်။ “It came. We fought. I won” ဆိုတဲ့ စကားလုံး (၆) လုံးပါပဲ။
ကင်ဆာရောဂါကို လများစွာ ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးနောက် လူလာက သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာ အပြုံးပန်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သူ့ရဲ့မိခင် ဓာတ်ပုံဆရာ ခရစ်စတင် ဘော်ဒန်က “ကျွန်မတို့မှာ ဖြစ်လာဖို့ ဒီသတင်းကို ဘယ်တုန်းကမှ မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ အခြားသူတွေရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာဇာတ်လမ်းတွေကြောင့် အမြဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာပါ”လို့ ပြောပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ Wilms ကင်ဆာအကျိတ် (ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ) ကို လူလာဘတ်သ်ရဲ့ကျောက်ကပ်မှာ ၂၀၂၀ခုနှစ် မတ်လက ဆရာဝန်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။
လူလာက အကျိတ်နဲ့ ကျောက်ကပ်တစ်ခုလုံးကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် ခွဲစိပ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ ခွဲစိပ်ကုသမှုမခံယူခင်က ၂၂ ပတ်အတွင်း ဓာတုကုထုံး (၁၃) ခေါက်လောက်လုပ်ရတဲ့ကုသမှုကို ခံယူခဲ့ရတာပါ။ “သမီးလေးက ဒါတွေအားလုံးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကျွန်မတို့မိသားစုမှာ အလင်းရောင်အဖြစ် ကျန်ခဲ့ပါပြီ”လို့ ခရစ်စတင်က ပြောပါတယ်။ လူလာလေး ကင်ဆာရောဂါခံစားခဲ့ရတဲ့ ခရီးစဉ်ကြီး အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ သူ့အမေက ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပေးခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်မတို့ရဲ့ဘဝတွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ ဒါမှ နောက်ကျရင် ထာဝရပြန်ကြည့်နိုင်မှာပါ။ ဒါက ကျွန်မတို့အတွက် အချိန်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်”လို့ လူလာရဲ့အမေက ပြောပါတယ်။
လူလာရဲ့မိဘတွေက လူလာလေး ကျန်းမာရေးကောင်းသွားလို့ အရမ်းဝမ်းသာနေကြတာပါ။ လူလာလေး ကင်ဆာရောဂါကို တွန်းလှန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး “သမီးက တစ်ခါမှ ငြီးငြူခဲ့တာမရှိပါဘူး။ မပျက်မကွက်ကို ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့တာပါ”လို့ ခရစ်စတင်က ပြောပါတယ်။ လူလာဆီမှာ အစ်ကိုတစ်ယောက်လည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီအစ်ကိုကလည်း လူလာလေး ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ဆံပင်တွေဆုံးရှုံးရတော့မယ့်အချိန်မှာ သူ့ညီမလေးအတွက် သူ့ဆံပင်တွေကို ရိတ်ပစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
Ref: ABCNews “Little girl celebrates being cancer-free in stunning photos”
Previous Previous post: “ယာ နဲ့ ရာ”
Next Next post: ကျန်းမာရေးမကောင်းပေမယ့် ဝမ်းရေးအတွက် အောက်စီဂျင်ဗူးတပ်ကာ တက္ကစီမောင်းစားနေရသူ